Madaxweyne Farmaajo Oo Maanta Dhagax Dhigay Tiyaatarka Qaranka+sawiro | Weheliye Online
Madaxweyne Farmaajo Oo Maanta Dhagax Dhigay Tiyaatarka Qaranka+sawiro
Maxamed Cabdullahi Farmaajo madaxweynaha Dowladda soomaaliya Maanta waxaa lagu wadaa in uu dhagax dhigo tiyaatarka qaranka soomaaliyeed, kaasi oo la doonayo in lagu dhiso barnaamijka loogu magacdaray isxilqaan qaran.
Munaasabada lagu dhagax dhigayo xarunta tiyaatarka qaranka ayaa waxaa maanta ka qeyb galaya dhammaan shaqaalaha dowaldda soomaaliya kaasi oo lagu sheegay warqad kasoo baxday wasaarada shaqada iyo arimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya.
Tiyaatarka qaranka ayaa noqanaya midka ugu horeeya ee lagu dhisayo barnaamijka loogu magacdaray isxilqaan qaran iyadoona dowaldda soomaaliya ay goor hore soo magacawday guddiga dhisaya tiyayatarka.
Maalin ka hor kulanka golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya ay ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa loogu dhawaaqay lacag 2 milion oo doolarka mareykanka ah kuwaas oo lagu wareejinayo gudiga isxaal qaran si ay ugu dhisaan xarumaha dowaldda ee lagu dhisayo barnaamijka isxilqaan hayeeshee xarumahaasi ayaa lagu sheegay inay yihiin tiyaatarka qaranka madxafka qaranka makatabada qaranka iyo garoonka kubada cagta ee stadium muqdisho.
Shacabka soomaaliyeed ayay ugu baaqday dowaladda soomaaliya inay ka qeyb qaataan dhismaha lagu sameynayo xarumaha dowladda ee lagu dhisayo is xilqaan.
Previous articleAkhriso: Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka mid noqtay Golaha Xuquuqul Insaanka Qaramada Midoobey
Next articleSuldaan seeraar oo soo saaray hees cusub “Mataantii Jaceylka” Daawasho wacan